Indibaniselwano yomoya, iisilinda, Ivaluva, neZilinganisi - SNS womoya
Unyango loMthombo woMoya
Ukuhlangabezana nesicelo semimandla ebanzi, i-SNS inothotho lwezixhobo zemodyuli kunye nolawulo loxinzelelo lomoya. Ngomgangatho othembeke kakhulu kwaye uzinzile ngaphezulu kweminyaka engama-20, iiyunithi zonyango lonyango lweSNS zihlala zikhetha abathengi.
I-SNS yenza iivevhe ngokukhetha ngokungqongqo kwawo onke amalungu kubandakanya ialuminium, ikhoyili, intwasahlobo, itywina, igrisi, umazibuthe… kuthotho lweTshayina kunye nabathengisi behlabathi. Ukuchaneka okuphezulu kunye nenkqubo elawulwa kakhulu kuwo onke amalungu angundoqo kunye nokudityaniswa / ukuvavanywa kwenza yonke i-SNS valve ukuqinisekiswa komgangatho ophezulu kunye nozinzo. Ukuxhasa ukwanda kwemihla ngemihla kwiimfuno ezintsha zeshishini, i-SNS iyaqhubeka nokukhulisa uluhlu olutsha minyaka le. Ukuza kuthi ga ngoku, sine-solenoid valve, i-valve yamanzi, i-valve yomoya, i-valve yokubetha, i-valve yokujonga ukuhamba, i-valve yokulawula ukuhamba, i-valve yomatshini, i-valve yesandla, i-valve yeenyawo, i-valve yokukhupha ngokukhawuleza, i-valve ye-shuttle, njl.
Izixhobo zomoya zibaluleke kakhulu kwaye ziyimfuneko kwiinkqubo zomoya ngakumbi umbhobho kunye nokufakwa. I-SNS inamava angaphezulu kweminyaka engama-20 yokuvelisa izixhobo, ngoku sineentlobo ezahlukeneyo zeplastiki yokufakelwa, izixhobo zentsimbi, izixhobo zokudibanisa umoya, izixhobo zomoya, i-PU tubing, i-PA tubing, i-silencers zomoya, izilinganisi zoxinzelelo, izibhamu zomoya, njl. I-SNS ikwenza ngokwezifiso iimveliso ukuba abathengi baneemfuno ezizodwa. FUNDA NGOKUGQITHISILEYO
I-SNS ibonelela ngeendlela eziphangaleleyo zomoya wesilinda yokuxhasa inkqubo yecandelo lokuzenzekelayo, kubandakanya iisilinda zomoya ezisemgangathweni kunye neesilinda zomoya ezingekho semgangathweni. Izimbo ze-pneumatic cylinder zibandakanya ityhubhu yentsimbi, isilinda encinci, isilinda esixineneyo, isilinda esine-piston, isilinda esilayidayo, isilinda engenantambo, isibophelelo somoya, isilinda yenaliti, isilinda ejikelezayo, ukubopha isilinda ejikelezayo, njl njl. Ngomatshini ophezulu we-CNC, iirobhothi kunye noomatshini Ukudibana kunye nokuvavanywa, i-SNS iye yaba ngumthengisi ophambili kushishino lokuzenzekelayo.
Sine nxalenye encinci yeemveliso ze-hydraulic: i-absorbers ezothusayo, ii-hydraulic valves, i-hydraulic switch switch kunye ne-hydraulic cylinder.
Ukuba neZiseko zeMveliso ezi-5
Iinkampani ezingaphezu kwe-20 ezixhasayo
Bangaphezu kwe-1000 abasebenzi
Inkampani Igubungela Indawo eyi-30000㎡
Ingaphandle entle, umgangatho wokuqinisekisa kunye neendleko ezifanelekileyo zihlala zizinto esizilandelayo.
SNS 4V2 Series Aluminium ingxubevange Solenoid Valve Ai ...
Ingcaciso yeMveliso &...
SNS APU10X6.5 Ihowuliseyili womoya hose pu umoya p ...
Ingcaciso yeMveliso ...
SNS SC Series aluminium ingxubevange kabini / isenzo esisodwa ...
Ubungakanani beBore (mm) 32 ...
SNS AC Series unyango womoya umthombo womoya un ...
Umzekelo AC1010-M5 AC2 ...
I-SNS 2W yolawulo lwento ehambelana ngqo ...
Umzekelo 2W025-08 2W0 ...
SNS MOV series womoya ulawulo mqengqeleki mqengqeleki ...
Inkcazo yeMveliso & n ...
I-SNS SPC Series Indoda eyi-Thread Straight Brush Push ...
SPC Series 8 Pipe Ububanzi ...
SNS SPL Series Male Ingqiniba L uhlobo zeplastiki umbhobho c ...
I-China SNS Pneumatic yasekwa ngo-1999 ngoku ibingumthengisi ophambili wezinto zomoya e-China. Inkampani igubungela indawo ye-30000 ㎡, eneemveliso ezi-5 kunye neenkampani ezingaphezulu kwe-20 ezinabasebenzi abangaphezulu kwe-1000.SNS idlulile i-ISO9001 kunye ne-2000 yoQinisekiso lweNkqubo yoLawulo loMgangatho ngenxa yenkonzo elungileyo kunye nomgangatho ophezulu. Ukuza kuthi ga ngoku zingaphezulu kwama-200 iiarhente nabasasazi kwihlabathi liphela kwaye sijonge phambili ekusetyenzisweni kweemarike zamanye amazwe.
NgoFebruwari / 25/2021
I-2021 China (Beijing) iMiboniso yeTekhnoloji ye-Hydraulic Pneumatic and Sealing Technology iza kubanjelwa e-China International Exhibition Centre ukusukela nge-28 ukuya kwi-30, 2021! Iya kutsala ngaphezulu kweenkampani ezingama-800 ezivela kumazwe angaphezu kwe-10 nakwimimandla kubandakanya ...
Siyavuyisana ngokufumana "uloyiso kabini"
Kulo nyaka, i-SNS ayigqithisanga kuphela ukuqiniswa kwebhetshi yamashishini aphezulu obuchwephesha kwiPhondo laseZhejiang ngo-2020, inombolo eyi-serial ingama-2583. kunye neTekhnoloji ...
I-SNS yomoya iya kuthatha inxaxheba kwi-PTC Asia yokuhambisa amandla kwi-Expo 2020
NgoJanuwari / 23/2021
Inkampani: China SNS Pneumatic Co., Ltd.
Idilesi: No.186 Weiliu Road, Economic Development Zone, YueQing, Zhejiang, CHINA